Migrant World TV မြန်မာပိုင်း အစီအစဉ်: အီးမေးလ်သို့ ရောက်ရှိလာသော ပြည်တွင်းက ညီအကိုတယောက်ရဲ့ အဖြစ်အပျက်
အီးမေးလ်သို့ ရောက်ရှိလာသော ပြည်တွင်းက ညီအကိုတယောက်ရဲ့ အဖြစ်အပျက်
လေးစားစွာဖြင့် စာရေးကြားအပ်ပါသည်။ကျွန်တော်က 2008 ခုနှစ်က ပထမအကြိမ် ပြုလုပ်သော ကိုရီးယား အလုပ်အကိုင် EPS-TOPIK စာမေးပွဲအောင်မြင်ထားသောသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်။ ကိုရီးယားမှာရှိသော မြန်မာ တယောက်ထံမှ အကို့အကြောင်း သိရသောကြောင့် ယခုလို စာပို.ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အကြောင်းအရင်းမှာ ကျွန်တော်တို.သည် 2010 ခု 10 လပိုင်းက ဒုတိယနှစ်အတွက် မြန်မာလုပ်သား 1771ဦး က အလုပ်လျှောက်လွှာ ပြန်လည် တင်ခဲ့ကြပါသည်။ ယခု 1700 နီးပါးက ကိုရီးယားတွင် အလုပ်လုပ်နေခွင့်ရရှိခဲ့ပြီး ကျွန်တော် အပါအ၀င် မြန်မာလုပ်သား လူဟောင်း 75 ယောက်သာ ကျန်တော့သည်ဟု အစိုးရပြည်ပအလုပ်အကိုင်အေဂျင်စီမှ ပြောကြားပါသည်။ဒု-အကြိမ် စာမေးပွဲ အောင်မြင်ထားပြီး ဇူလိုင်လမှာ အလုပ်လျှောက်လွှာတင်သူ အသစ် 4110 ယောက်မှာ ယခု နှစ်ပတ်အတွင်း Calling ရရှိခဲ့သူပေါင်း အယောက် 100 ကျော်ရှိသွားပါပြီ။ထိုအထဲတွင် လူဟောင်းတယောက်မျှ မပါဝင်ခဲ့ပါ။
သို့ဖြစ်ပါသဖြင့် ကျွန်တော်တို.က DVB သို့စာပေးပို့ခဲ့ပါသည်။29.7.11 နေ့က DVB က အသံလွှင့်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသတင်းကြောင့် အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှ ဒု-၀န်ကြီး ဦးမြင့်သိန်း ရောက်ရှိလာပြီး 5.8.11 နေ့က အစိုးရပြည်ပ အလုပ်အကိုင် အေဂျင်စီ(ကိုရီးယားဘက်သို့EPSစနစ်အရ ပို့ဆောင်ခွင့်ရရှိသော ဌာန)သို့ ရောက်ရှိလာပြီး လူဟောင်းများနှင့် ပတ်သက်ပြီး အစည်းအဝေးပြု လုပ်ခဲ့ပါသည်။
ထိုအစည်းအဝေးမှ ၀န်ကြီးက လူဟောင်းများ ဘာကြောင့် Calling မရရှိသလဲဟု မေးမြန်းသောအခါ ကျန်နေသေးသော လူဟောင်းများသည် အချက်အလက် ကွဲလွှဲမှု (Name/Date of Birth/Passport No စသည့် မှားယွင်းမှုမဟုတ်ပဲ)မှာ သာမန်ကွဲလွှဲမှုများသာဖြစ်ပါသည်။ထို.ကြောင့် ကိုရီးယားဘက်မှ အလုပ်ရှာဖွေသူ တန်းစီစာရင်းတွင် မထည့်ထားသောကြောင့် အရွှေးမခံ ရတာ ဖြစ်ကြောင်း ၀န်ကြီးအားတင်ပြခဲ့ပါသည်။
ထိုတင်ပြချက် မှန်ကန်ပါက ကိုရီးယားဘက်မှ အချက်အလက် ကွဲလွှဲနေသူများစာရင်းကို စောလျှင်စွာ ပေးပို့ ခဲ့မှာ သေချာပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် အချက်အလက်ကွဲလွှဲနေသော မြန်မာလုပ်သားအချို. ( ကိုရီးယားဘက်မှ Different Photo ဟု သတ်မှတ်သောသူများ စသည့်) တို့သည် Calling ရရှိပြီး ကိုရီးယားတွင် အလုပ်လုပ်နေကြရပြီး ဖြစ်ပါသည်။
အဲဒီ အချက်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အစိုးရပြည်ပအလုပ်အကိုင်အေဂျင်စီရှိ ၀န်ထမ်းများသည် အချိန်နှင့် တပြေးညီ အလုပ်သမားများကို အကြောင်းကြားဆောင်ရွက်မှု မရှိပဲ ၀န်ကြီးမှ မေးမြန်းသော အခါမှ တင်ပြပြောဆိုလာခြင်းကြောင့် လူဟောင်း 75 ယောက်သည် ယခု အချိန်ထိ ရွေးချယ် မခံရပဲ နစ်နာခဲ့ရပါသည်။
ကျွန်တော်တို့သည် 2006 ခု EPS စနစ်အရ နှစ်နိုင်ငံ MOU လက်မှတ်မထိုးခင်အချိန်ကစပြီး ကိုရီးယားသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိရန် စောင့်ဆိုင်းနေကြသူများဖြစ်ကြောင်း၊ အစိုးရပြည်ပအလုပ်အကိုင် အေဂျင်စီမှ ၀န်ထမ်းများ (ကွန်ပြူတာပိုင်းဆိုင်ရာမှ ၀န်ထမ်းများ)ကအလုပ်ကို ပြီးစီးအောင်မလုပ်ခဲ့မှုကြောင့် ရွေးချယ်မခံရပဲ နစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ ရပါသည်။
ထိုနစ်နာဆုံးရှုံးမှုမှာ အလုပ်သမားတယောက်အနေနှင့်သာမက ထိုအလုပ်သမားများရဲ. နောက်မှာရှိသော မိသားစု များပါ နစ်နာခဲ့ရပါသည်။ဒု-၀န်ကြီးမှ ကျန်နေသော လူဟောင်း 75 ကို ကိုရီးယားဘက်သို့ အချက်အလက်များပြန်ပို့ပေးမည်ဟု ပြောသော်လည်း ကျွန်တော်တို့အတွက် အချိန်များစွာ မရှိတော့ပဲ2လခန့်သာကျန်ရှိပါတော့သည်။ စာမေးပွဲသက်တမ်း ကာလမှာ 2011 ခု 10 လပိုင်းမှာ ကုန်ဆုံးတော့မည်ဖြစ်သောကြာင့် ကိုရီးယားသို့သွားပြီး အလုပ်လုပ်ဖို့ အခွင့်အရေးက အရမ်းနည်းပါးသွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါသောကြောင့် ပြည်ထောင်စုသမတမြန်မာနိုင်ငံတော် ရဲ. သမတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် ကိုရီးယားဘက်ရှိ EPS နှင့်ပတ်သက်သော တာဝန်ရှိ လူကြီးများမှ လူဟောင်း 75 ယောက်ရဲ. အလုပ်သမားများအခွင့်အရေး နစ်နာဆုံးရှုံးမှု မရှိအောင် ထိုအလုပ်သမားများရဲ. ကိုရီးယားနိုင်ငံသို.သွားရောက် လုပ်ကိုင်လိုသောစိတ်၊ စောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသော အချိန်ကာလတို့ကို ငဲ့ညှာထောက်ထားပြီး ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်စေလိုကြောင်း တင်ပြလိုက်ပါသည်။
작성자: စိုးမိုးသူ 시간: 오전 6:24